कर्णाली प्रदेश सरकारको सय दिन : ‘संघीय सरकारका कारण काम गर्ने वातावरण पाएनौँ’ - Machhapuchhre FM
Teachers take students on educational trip to Nepal for booze
Huge fire at Germany's largest theme park
Published by Machhapuchhre FM at 2018-05-27
सुर्खेत, जेठ १३ – कर्णाली प्रदेशको एक सय दिन पूरा भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूहरुले गरेको कामप्रति असन्तुष्ट रहेको बताएको छ । आइतबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलन मुख्यमन्त्री शाहीले यो एक वर्षमा गरेका कामहरु प्रति सिंगो मन्त्रीपरिषद नै असन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरुले पहिलो मन्त्रीपरिषदको बैठकदेखि नै निर्णय गरेका विषय सन्तोषजक रुपमा कार्यान्वयन गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारका योजना सोचे अनुरुप कार्यान्वयन गर्न नसके पनि प्रदेशको समृद्धिका लागि स्पष्ट खाका भने तयार गरिरहेको बताउनुभयो । ‘कानुन र संरचना नुहँदा सरकारले यो सय दिनमा सोचे अनुरुप सफलता हासिल गर्न सकेन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि तयार गर्न सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रमुख कारण संघीय सरकार पनि हो । उसले संघीय कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या परेको छ ।’
संघले कानुन नबनाउँदा आफूहरुलाई काम गर्न असहज वातावरण भएको उहाँको भनाई छ । संघीय सरकारले कानुन बनाउन जति ढिला गर्छ त्यति प्रदेश सरकारलाई असर गर्ने मुख्मन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशका १३ वटा मन्त्रीपरिषद बैठक बसेका छन् । प्रदेशको नामाकरण, राजधानी तोक्ने विभिन्न विधेयकको मस्यौदा, कार्यविधि तथा आचारसंहिता निर्माणलाई सरकारले आफ्नो प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ । सय दिनमा कर्णाली प्रदेशले आवश्यक पर्ने विभिन्न २० वटा कानूनहरूको तर्जुमा गर्न मन्त्रालयगत जिम्मेवारी तोकी सैद्धान्तीक स्वीकृती दिएको छ भने कर्णाली प्रदेश सभामा ९ वटा विधेयकहरू पेश गरेको छ ।
यस्तै सात वटा कार्यविधि, निमावली तथा आचारसंहिता स्वीकृत गरेको छ । सरकारले यस सय दिनमा चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ । प्रत्येक महिनाको १ र १५ गते श्रम दिवस मनाउने निर्णयलाई कार्यान्वय र प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि हिमाली जिल्ला मुगु हुँदै हुम्ला जोड्ने लिङ्करोड निर्माणको घोषणा गरेको छ ।
सरकारले यस अवधिमा प्रदेशमा थप श्रोत साधनको परिचान गर्न आन्तरिक श्रोत साधनको पहिचान र राजस्वको दायरा बढाउन सरकारले प्रयास सुरू र कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५लाई उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको...
टिकट बुकिङमा यातायात समिति र क...
लालपुर्जाविहीन गुर्जा गाउँको द...
तेस्रो संविधान दिवसः संविधानले...
नेपाली राजनीतिमा “अरिङ्गाल” आत...
पावरन्यूज प्रभावः रकमबहादुरले ...
‘बम्जनको आश्रम र मुम्बईको कोठी...
रेकमको रकमी धन्दाः ६ हजारमा १०...
इन्टरपोलका मोस्टवान्टेड गोविन्द टोकियोमा यसरी नाच्दै,समस्या सुन्दैन जापान स्थीत नेपाली दुतावास !
पुष्कर शाहलाई पर्यटन दुत बनाउने पर्यटन मन्त्रीको घोषणा। टाउको र शरीर छुट्टाछुट्टै !
विश्व साईकल यात्री पुष्कर शाह अष्ट्रेलियामा भाडा माँझ्दै, लाईभ कार्यक्रममा यसरी आँशु झारे !